အိုးထရက်ဖိုဒ့် ကွင်းထဲက ပြင်သစ်သားများ . . . . ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်အောင်မြင်ခဲ့ကြသလဲ ? - SPORTS MYANMAR
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကတော့ ဒီနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အပေါ် သဘောကျ ကျေနပ်နေမှာပါ ။ ရာသီပေါင်း များစွာ အားနည်းချက်လို ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ညာတောင်ပံ အတွက် ဂျေဒန် ဆန်ချို ကို ခေါ်ယူနိုင်မှုဟာ ရာသီသစ် ကို စောင့်ကြို နေတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကို စိတ်လှုပ်ရှား စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အတွေ့အကြုံရင့် ပြင်သစ် ခံစစ်မှူး ရာဖေး ဗာရန်း ကို ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကနေ ခေါ်ယူ လိုက်မှုဟာလည်း ဆန်ချို ရောက်ရှိလာမှု အတွက် အားရ နေတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေကို အချိုပေါ် သကာလောင်းသလို ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဗာရန်း ဟာ သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းက ရီးရဲ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်း ကို သွားရောက် ခဲ့ပြီး အသင်းဖော်တွေ ၊ နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ နဲ့ ကလပ် ဥက္ကဌ ပီရက်ဇ် ကို နှုတ်ဆက်ကာ မန်ချက်စတာ စွန့်စားခန်း ဖွင့်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ သုံးသပ်သူတွေ ကတော့ ဗာရန်း ရောက်ရှိလာမှုဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခံစစ်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေပြီး ရာသီသစ် ရဲ့ ချန်ပီယံလောင်း တစ်သင်း ဖြစ်လာဖို့ တွန်းအား ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ သုံးသပ် ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဗာရန်း ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ပရီးမီးယားလိဂ် ခေတ်မှာ လာရောက် ကစားခဲ့တဲ့ ၁၃ ယောက်မြောက် ပြင်သစ်သားလည်း ဖြစ်လာစေခဲ့ ပါတယ် ။ အဲရစ် ကန်တိုနာ ကနေ အစပြု ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပြင်သစ်သားတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဟာ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေ ရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိ မှာတော့ အန်တိုနီ မာရှယ် နဲ့ ပေါ့ဘာ တို့ဟာ အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ပြင်သစ်သားအဖြစ် ရှိနေပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ် လက်ထက်မှာ ကန်တိုနာ ၊ အီဗာရာ တို့လို အောင်မြင်တဲ့ ပြင်သစ်သားတွေ ရှိခဲ့သလို အိုဘာတန် ၊ ရှနိုက်ဒါလင် ၊ ဘယ်လီယွန် တို့လို မအောင်မြင် ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ် ကစားသမားတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ ဗာရန်း ကတော့ ဘယ်သူရဲ့ ခြေရာကို လိုက်နင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့် ရမှာပါပဲ ။
ဗာရန်း မတိုင်ခင် ယူနိုက်တက်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်သား ၁၂ ယောက်ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်သူ ၊ ကျရှုံးသူ နဲ့ အသင့်အတင့် ရရှိခဲ့သူတွေ အဖြစ် ခွဲခြားကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျရှုံးခဲ့သူ တွေမှာတော့ ဝီလ်ယံ ပရူနီယာ ၊ အိုဘာတန် ၊ ဒေးဗစ် ဘယ်လီယွန် ၊ မော်ဂန် ရှနိုက်ဒါလင် တို့ကို စာရင်း ထည့်သွင်းရမှာပါ ။
ပြင်သစ် နဲ့ ၁၉၈၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖေဘီယံ ဘားသက် နဲ့ လောရင့် ဘလန့် တို့ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်မှာ အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ လက်ရှိ ကစားနေကြတဲ့ အန်တိုနီ မာရှယ် နဲ့ ပေါလ် ပေါ့ဘာ တို့ကလည်း ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ပြည်တွင်း ရှုံးထွက် ဖလားတွေကို ရယူနိုင်ခဲ့ ကြတာကြောင့် အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်နေတဲ့ သူတွေ အဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာပါပဲ ။
ယူနိုက်တက် မှာ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရတဲ့ ပြင်သစ်သား ၄ ယောက်ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒိ လူတွေကတော့ မီခေး ဆီဗက်စတြာ ၊ လူးဝစ် ဆာဟာ ၊ ပက်ထရစ် အီဗရာ နဲ့ အဲရစ် ကန်တိုနာ တို့ပါပဲ ။ ဆီဗက်စတြာ ဟာ ယူနိုက်တက် မှာ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အထိ ကစားသွားခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ၄ ကြိမ် ၊ FA Cup ၊ ချန်ပီယံလိဂ် နဲ့ လိဂ်ဖလားတွေကို ရခဲ့သလို အသင်းရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ နေရာ နဲ့ ဗဟိုခံစစ်တွေမှာ ကျရာ တာဝန်ကို ကောင်းစွာ ထမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
လူးဝစ် ဆာဟာ ကိုတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မှာ ဖူလ်ဟမ် အသင်းကနေ မြင့်မားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူ ခဲ့တာပါ ။ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူးဟာ အိုးထရက်ဖိုဒ့် ရဲ့ အနီရောင် ဂျာစီကို ၄ ရာသီ ဝတ်ဆင် ခဲ့ပြီး ပွဲ ၁၂၀ ကျော် မှာ ဂိုး ၄၀ ကျော်သွင်းပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ဆာဟာ လည်း အမှတ်ပေး ဖလား ၂ ကြိမ် ၊ ချန်ပီယံလိ၈် နဲ့ လိဂ် ဖလားတို့ကို ရယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပက်ထရစ် အီဗရာ ကတော့ ဒီကနေ့ခေတ် ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် ကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်သားတွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံး အဖြစ် ကန်တိုနာ နဲ့ အပြိုင် သတ်မှတ် ခံခဲ့ရပါတယ် ။ မိုနာကို အသင်းကနေ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဆောင်းရာသီမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ အီဗရာ ဟာ အသင်းမှာ ၈ နှစ်ကြာ ကစားပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီဗရာ ဟာ ဖာဂူဆန် လက်ထက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေ မှာ အဓိက ကစားသမား တစ်ယောက် အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း ၃ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံ အပါအဝင် အမှတ်ပေးဖလား ၅ လုံး ၊ ရှုံးထွက် ဖလား ၃ လုံးနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျောက် အကောင်းဆုံး ဘယ်နောက်ခံလူတွေထဲက တစ်ယောက် အဖြစ်လည်း သတ်မှတ် ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဲရစ် ကန်တိုနာ ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရောက် ပြင်သစ်သားတွေထဲမှာ အကျော်ကြားဆုံး ၊ အကောင်းဆုံး တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ကြပါတယ် ။ အီဗရာ လို ဥရောပ အောင်မြင်မှု မရှိခဲ့ ပေမယ့် ကန်တိုနာ ဟာ အီဗရာ ထက် ပိုပြီး အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍကနေ ပါဝင် ခဲ့ပါတယ် ။
ကန်တိုနာ ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ် မှာ လိဒ်ယူနိုက်တက် ကနေ ခေါ်ယူ ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုတွေနဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော် ဝေးကွာ နေတဲ့ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံဆုကို ရယူ နိုင်ခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂ် ခေတ်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းတစ်သင်း ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ကန်တိုနာ သာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ယူနိုက်တက် ဟာ ဒီကနေ့မှာ ဒီလောက် အောင်မြင်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူဘူးဆိုတဲ့ သုံးသပ်မှုတွေဟာ ဘာကြောင့် ကန်တိုနာ ကို “The King” ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ဂုဏ်ပြု ခဲ့ကြသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အကောင်းဆုံး အဖြေပေးနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် . . . ။